Apple inotangisa beta nyowani 5 yeTVOS 10.2 uye watchOS 3.2 | Ndinobva mac
Nezuro chaiye tanga tine beta vhezheni macOS 10.12.4 beta 5 zvese zvevagadziri uye zvevashandisi vakanyoreswa muchirongwa cheveruzhinji beta - hongu, pakupera kwemasikati vhezheni yeruzhinji yakavhurwa- uye chinguva chidiki chakapfuura avo vanobva kuCupertino vatangisa shanduro dzekuvandudza dzeIOS, tvOS 10.2 uye watchOS 3.2 . Mune ino kesi, sekune dzakamboitika nguva, isu tine zvigadziriso mukuita kwese kweshanduro, gadziriso inogadzirisa uye madiki mabhugi kubva kune yapfuura beta vhezheni.
Apple kazhinji inosunungura iyo tvOS 10.2, watchOS 3.2 uye iOS vhezheni kutanga pamberi peiyo macOS yekuvandudza vhezheni, asi mune ino nyaya mabasa akachinjwa. Izvo zvinokwanisika kuti sanezuro tichava neruzhinji vhezheni yeIOS masikati ano, mumaawa mashoma chete uye nekudaro tinofanirwa kuteerera nekuti yeruzhinji beta yekugadzirisa inogona kuoneka munguva pfupi.
Mukutaura, izvo zvatiinazvo ndizvo zvinogona kuve beta yekupedzisira yeOS dzakasiyana dzakaburitswa masikati ano, pamwe navo iro boka revashanduri revagadziri rakavharwa uye hazvingashamise kuti svondo rinouya tinoona zviri pamutemo uye zvekupedzisira shanduro. Asi isu hatina nhau dzakakosha kudaro mushanduro nyowani kunyangwe paine shanduko senge "Cinema mode" paApple Watch kana Night Shift paMacs, saka hapana chekumhanyisa uye chatino bvunza ndechekuti kana dzikaparurwa ivo havana chero rudzi rwekutadza. Zvinogona zvakare kunge kuti svondo rinouya tinenge tisina betas, asi ichi ndicho chinhu chichaonekwa, nekuti izvozvi tichazvisiira kune vanogadzira kuti vaongorore idzi shanduro nyowani kuti vaone kana vawana chimwe chinhu chinonakidza ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Apple inoburitsa nyowani beta 5 yeTVOS 10.2 uye watchOS 3.2
Apple Inowedzera Nhamba Yemabhangi neChikwereti Institutions Inotsigira Apple Kubhadhara muJapan neUnited States